DEG DEG: Kooxda Manchester United oo heshiis cusub ka saxiixatay Marcus Rashford – Gool FM
Haaruun July 1, 2019
(Manchester) 01 Luulyo 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay qandaraas cusub ka saxiixatay ciyaaryahankeeda Marcus Rashford.
Manchester United waxa ay xaqiijiray inay Marcus Rashford ka saxiixatay heshiis afar sanadood ah oo cusub, isla markaana uu dooq u haysto inuu sanad kale ku daro qandaraaskiisa haddii loo baahdo.
Heshiiskan cusub ayaa cusub waxa uu garoonka Old Traffrod ku sii hayn doonaa illaa sanadka 2023-ka, waxaana Rashford uu heshiiskaan cusub isbuucii ku qaadan doonaa adduun dhan £250,000.
Bayaan ay ku xaqiijisay kooxda Man United heshiis cusboonaysiinta Rashford kaasoo ay soo dhigtay website-keeda rasmiga ah ayaa u dhignaa: “Manchester United waxa ay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo in Marcus Rashford uu saxiixay heshiis cusub, kaasoo kooxda ku sii hayn doona illaa bisha June sanadka 2023-ka, waxaana uu dooq u haystaa inuu sanad kale oo dheeri ah ku darsado.”
21-sano jirkaan ayaa ka soo baxay akadeemiga kooxda, waxaana uu ka mid ahaa Manchester United tan iyo markii uu todoba sano jirka ahaa, waxaana Weeraryahankan uu kooxda u saftay 170 kulan, halka dalkiisa England uu u ciyaaray 32 kulan.
Kooxda Arsenal oo bilowday ololaha ay lambarrada kaga bedelayso qaar ka mid ah xiddigaheeda & Goolhaye Bernd Leno oo lambar cusub loo xiray